Isibonakaliso | RayHaber | Isitimela | Umgwaqo omkhulu | ikhebula imoto
IkhayaRayHaber | Izindaba Zezindaba Zesitimela Zasemigwaqweni Yezitimela Ezihamba ngezinyawo nezitimelaithegi
Minyaka yonke, ngesivinini wesitimela wemboni, Turkey kuyinto Waqhubeka ekhula babe umholi e-Europe. Ukutshala izimali ezitimeleni, ezithatha lejubane ukusuka ezitimeleni eziphakeme, ziqhubeke ukwandisa. Ngaphandle kwemali eyenziwe edolobheni, izinkampani zethu eziningi zokukhiqiza zasekhaya zikhanya. Kuziqhenya ngokuthi uqale ukukhiqizwa kweTurkey esheshayo ın isitimela sikazwelonke ın kanye ne-tram yasekhaya, isitimela esilula kanye nabakhiqizi bemoto yasemgwaqweni. Siyajabula kakhulu ngokuba kuleli khafula eliziqhenyayo.
Besisebenza iminyaka ne-7 njengentatheli enobuhlakani futhi engakhethi. RayHaber Iwebhusayithi yethu isibe ingosi enkulu yezindaba ephethe isilinganiso sezivakashi eziyingqayizivele zama-50 ngezinsuku eziyisithupha ngezindaba eziyinkulungwane ze-20, imibiko yezindali yansuku zonke kanye ne-30 yesitimela yonyaka yesitimela. Inhloso yethu ukuhambisa yethu 100 ayizinkulungwane izivakashi nsuku zonke, indawo simo kazwelonke ungene lokuqala oluya indawo eTurkey.
Umakethe wezitimela waseTurkey Isisindo siphakeme. Izinkampani zokukhiqiza zendawo. Ukwengeza emotweni yendawo, i-LRT nezimoto zasemgwaqweni, okuthiwa "izitimela zikazwelonke". Siyajabula ukuba kuhlonipheke kulesi simo.
Sisebenzela izindaba zokukhangisa ezintsha nezingenamfihlo zeminyaka ye-7. RayHaber ikhasi lewebhu elinezindaba ezingaphezu kwe-50.000, amathenda ansukuzonke ansuku zonke neminyaka ye-20 yesitimela ethola ingosi enkulu enabavakashi abakhethekile be-30.000 ngosuku. Inkomba yethu entsha kubavakashi be-100.000 ngosuku futhi kuzoba kumasayithi we-1000 kuhlu lwamawebhusayithi aphesheya kwezilwandle.
abezindaba: amaphephandaba ewebhu / aphrintiwe
Wasekelwa: Isivivinyo se-01.12.2011 / i-01.01.2011 bukhoma
Izindaba: Izindaba ze-60.000, ividiyo ye-1700
izivakashi: I-30.000 iyodwa / usuku
Ucingo: + 90 232 700 0 729
RayHaber.com ithembisa ukuhambisana ne-Press Professional Izimiso nawo wonke amalungelo agodliwe.
Ikhasi lethu lezindaba lishicilelwa ngokuya nge-Law on Intellectual and Artistic Works ebalwe i-5846. Ukushicilela kabusha nokushicilela izindaba ezitholwe kuma-ejensi kunoma yiluphi uhlobo kudinga imvume ebhaliwe yangaphambilini ngokuya ngenqubomgomo yezinhlangano ezifanele. RayHaberezinye izindatshana nezindatshana ezishicilelwe ku- RayHaberingashicilelwa kabusha ngaphandle kokuthi isixhumanisi sinikezwe ekhasini elihlobene le .com. RayHaberAbabhali banesibopho sezindatshana namazwana ashicilelwe ku .com.
Inqubomgomo Yethu Yezindaba
Indawo yethu ayithathi hlangothi futhi yazisa abafundi bayo kuphela ngezehlakalo nezehlakalo ezindabeni ezishicilelayo futhi ziyaqhubeka nokushicilela. Inhloso yokuyichaza nokuyethula kubafundi bayo ngaphandle kokuthinta izehlakalo. RayHaberOkuqukethwe posted Play 100% ishicilelwe ngokuhambisana nemithetho-Republic of Turkey, inyatheliswe zonke izinhlobo izithombe, ulwazi, kanye izindaba ezivela kumnikazi we-copyright umbhalo kwesokudla ezishicilelwe ngokuthola imvume ebhalwe phansi.
RayHaber.com, indawo yethu yezindaba, umthetho, imithetho, amalungelo obunikazi kanye namalungelo wobuntu azibophezele ukuhlonipha. Isayithi lethu lisebenza 'njengomhlinzeki wokuqukethwe' njengoba kuchazwe emthethweni 5651. Ngokomthetho ofanele, ukuphathwa kwesiza akuphoqelekile ukulawula okuqukethwe okungekho emthethweni. Ngakho-ke, isiza sethu samukele umgomo 'wokuxwayisa nokususa'. Izinhlangano zabanikazi bamalungelo ezingabaza ngeqiniso lezindaba futhi zinomuzwa wokuthi imisebenzi ene-copyright yabiwe ngokungemthetho futhi amalungelo ezomthetho aphulwa yiziphi izindaba, info @Rayhaber.com imeyili noma IFOMU YOKUXHUMANA. Ummeli wakho uzobuyekeza izikhalazo zakho kanye nezicelo kanye nokuqukethwe okucatshangwe ukuthi kwephulwe kuzosuswa kuwebhusayithi yethu ngokushesha.
Inqubomgomo Yobumfihlo / Inqubomgomo Yobumfihlo
© Copyright 2018 RayHaber.com wonke amalungelo agodliwe. Amalungelo obunikazi azo zonke izinhlobo zokuqukethwe njengekhodi, izindaba, izithombe, izingxoxo RayHaber.com. RayHaberZonke izindatshana, izinto zokwakha, izithombe, amafayela alalelwayo, ukugqwayiza, amavidiyo, amacebo nokuhlelwa kusayithi le .com kuvikelwe ngumthetho welungelo lobunikazi i-5846. lezi RayHaber.com kungenzeka ingakopishwa, isatshalaliswe, iguqulwe, ishicilelwe nganoma iyiphi indlela ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye .com. Ukukopisha nokusebenzisa akunakwenziwa ngaphandle kwemvume nangaphandle kokusho umthombo.
Sizogcina imininingwane yakho iyimfihlo. Ngokuvamile, sizosebenzisa imininingwane yakho ngaphakathi kwe RayHaberNgiqhathanisa. Noma kunjalo, kwesinye isikhathi RayHaber.com isebenzisa abantu besithathu ukucubungula imininingwane yakho. RayHaber.com idinga ukuthi laba bantu besithathu bahambisane ngokuqinile nemiyalo yayo futhi RayHaber.com idinga ukuthi bangasebenzisi imininingwane yakho. Lapho uxhumana RayHaber.com kwesinye isikhathi sithola imininingwane yomuntu ngawe. Isibonelo, uma usibhalela noma usibhalisela incwadi yezindaba, ungasitshela ukuthi ungubani, singakuxhumana kanjani nokuthi ucabangani. Lapho usebenzisa RayHaber.com services online, sisebenzisa amakhukhi futhi siqoqa amakheli e-IP. Ungathola okuningi ngalokhu RayHaber.com amakhukhi isigaba seNqubomgomo yethu Yobumfihlo egcwele.